Air New Zealand waxay go'aansatay Boeing 787-10
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air New Zealand waxay go'aansatay Boeing 787-10
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Boeing iyo Air New Zealand waxay maanta dhameystireen amar sideed 787-10 dayuuradood oo Dreamliner ah oo lagu qiimeeyay $ 2.7 bilyan qiimaha liiska. Diyaaradda, oo loo aqoonsan yahay duulimaadyadeeda muddada-dheer iyo shabakadda caalamiga ah, waxay dhexgeli doontaa moodelkii ugu weynaa ee Dreamliner diyaaradeeda heerka caalami ee 787-9 iyo 777 diyaaradeed laga bilaabo 2022 si istiraatiijiyad u kobciso ganacsigeeda.
Heshiiska diyaaradda, oo lagu dhawaaqay bishii Maajo sida ballanqaadka, waxaa ka mid ah xulashooyinka in lagu kordhiyo tirada diyaaradaha siddeed illaa 20, iyo xuquuqda beddelka oo u oggolaanaya beddelka ka weyn 787-10 illaa 787-9s yar, ama isku darka labada moodooyinka gawaarida mustaqbalka iyo dabacsanaanta shabakadda.
“Tani waa go’aan xiiso u leh ganacsigeenna iyo macaamiisheenna maadaama aan gaarsiinay ballanqaadkeenna ah inaan kor u qaadno ganacsigeenna si joogto ah. Iyadoo 787-10 ay bixinayso kudhowaad boqolkiiba 15 macaamiil iyo xamuul ka badan 787-9, maalgashigan wuxuu abuurayaa barxad mustaqbalkeena istiraatiijiyadeed wuxuuna furayaa fursado cusub oo lagu kori karo, ”ayuu yiri Madaxa Sare ee Air New Zealand. Christopher Luxon.
Maaddaama uu yahay xubinta ugu weyn ee rakaabka raalli geliya ee waxtarka badan leh ee Dreamliner ah, 787-10 waa 224 cagood (68 mitir) wuxuuna fadhiisan karaa ilaa 330 rakaab ah oo isugu jira qaab laba heer ah, qiyaastii 40 ka badan 787- 9. Iyada oo ay kuxirantahay qaybo teknoolojiyad cusub ah iyo naqshad kacaan, 787-10 ayaa dejiyay halbeeg cusub oo ku saabsan waxtarka shidaalka iyo dhaqaajinta dhaqaalaha markii ay soo gashay adeegga ganacsiga sanadkii hore. Diyaaraddu waxay u oggolaaneysaa hawlwadeennada inay ku guuleystaan ​​boqolkiiba 25 boqolkiiba shidaal kafiican halkii kursi marka la barbar dhigo diyaaradaha hore ee fasalkeeda.
“Air New Zealand waxay sameysay maalgashi istiraatiijiyadeed oo aad u ballaaran oo duulimaadyo ballaaran ah si ay ugu dhisato xaaladdeeda hoggaamiye caalami ah oo isku xiraya Koonfurta Baasifig iyo Asia iyo Ameerika. Aad ayaan sharaf noogu tahay in Air New Zealand ay dooratay in lagu daro 787-10 iyo awooddeeda gaarka ah si ay u kabaan diyaaradeeda muddada dheer qaadaysay oo ahayd 777 iyo 787-9. Ihssane Mounir, madaxweyne ku xigeenka sare ee Iibka iyo Suuqgeynta, Shirkadda Boeing.
Air New Zealand wuxuu ahaa macaamiil caalami ah oo loogu talagalay 787-9 maantana wuxuu ku shaqeeyaa 13 ka mid ah noocyada 'Dreamliner'. Iyada oo 787-9 kale jidka loo marayo iyo 787-10 diyaarado mustaqbalka, diyaaradaha shirkadda ee Dreamliner ayaa ku socda wadadii ay ku kici lahaayeen ilaa 22. Diyaarada cusub ee Dreamliner ayaa badali doonta raxan Air New Zealand oo sideed 777-200ER ah. Hawada Niyuusiilaan raxan ballaadhan sidoo kale waxaa ku jira toddoba 777-300ER.
Iyada oo qayb ka ah dadaalladeeda ay ku ilaalinayso raxan hufan oo la isku halleyn karo, Air New Zealand waxay isticmaashaa tiro ka mid ah xalalka Adeegyada Caalamiga ah ee Boeing, oo ay ku jiraan Maareynta Caafimaadka Diyaaradda iyo Qalabka Waxqabadka Dayactirka. Xalalkan dhijitaalka ah waxay bixiyaan macluumaadka dayactirka iyo qalabka taageerada go'aan ee u suurta geliya kooxaha dayactirka diyaaradaha inay kordhiyaan waxtarka hawlgalka.